Tajaajiltoonni mootummaa 152 tajaajila oonlaayni akka kennan taasisuufi – Fana Broadcasting Corporate
Tajaajiltoonni mootummaa 152 tajaajila oonlaayni akka kennan taasisuufi
Finfinnee, Onkololeessa 7, 2012 (FBC) – Bara baajataa qabametti dabalataan Tajaajiltoonni mootummaa tajaajila oonlaayni akka keennan taasisuun ibsame.
Ministeerri Teeknooloojii fi Innoveeshinii dhaabbileen mootummaa tajaajila isaani oonlaayni kennuu kan isaan dandeessisu waltajjii marii fi hubannoo kennu gaggeeffameera.
Ministeera Teeknooloojii fi Innoveeshinii kan hundaa’e projeektiin appilikeeshinii tajaajila elektirooniksii biyyaalessa haala amma irra jiru, rakkinoota isa qunnamee fi karoora dhiyeessuun gamaaggamamuun gara fuulduraatti furmaanni kallatti itti tajaajjila isaa babballisuu danda’u ka’ameera.
Ministeera Teeknooloojii fi Innoveeshiniitti daayreekterri waliigalaa damee bulchuiinsaa fi misooma ICT Abiyoot Sinaamoo hanga ammatti projeektichaan tajaajjiltooni 126 misoomuun dhaabbilee 34 gara hojiitti galaniiru jedhan.
Ibsaa, interneetii fi neetwoorkiin akkaata barbaadameen guutamuu dhabamuun irraan kan ka’e, fedhii maammiltoota waliin wal gituu dhabuun ammo rakkinoota tajaajila kana ta’uu waltajjicha irratti ka’eera.
Dhaabbileen garaagaraa tajaajila laataan oonlaayni akka tajaajilaa kennan taasisuu fi gara hojiitti akka galaniif waliigaltee ministera Teeknooloojii fi Innooveshiinii waliin mallatteessaniiru.
Kaameeraa Addunyaarratti Xiqqaa ta’e ifoome
Konkolaataan sa’aatiitti fageenya Kiiloo meetira kuma 1 ol imaluu danda’u hojjetame
Daandiiwwan qilleensaa qilleensa faalaa jiru jechuun komataman
Tajaajila walitti hidhaminsa aanaalee cimsuuf hojjetama jira jedhan
Israa’el hogganaa olaanaa garee hidhattoota Filisxeem Baahaa…
Ibsa Abbaan Alangaa waliigalaa FDRI laate
Buufanni Xiyyaara Ityoophiyaa Aviiyeeshin Akkaadaamiin…
Eebbifamtoota Yuunvarsitii kuma 5 ol gara hojiitti…